Websitekii soo bandhigay macluumaadka magangalyo doonka oo la xiray | Somaliska
Websitekii aan hada ka hor wax ka qornay ee soo bandhigay macluumaad xasaasi ah ee ku saabsan dadka sharciyada la siiyay ayaa la xiray ka dib markii baaritaan dheer lagu fashiliyay cida iska leh isla markaana dacwo badan looga gudbiyay booliska.
Websitekaan oo lagu magacaabo Migileaks, hawshiisana tahay in ay soo bandhigaan kiisaska dadka sharciyada la siiyay ayaa waxa uu nolosha dad badan oo soo galooti ah dhibaato ku noqday maadaama uu xitaa soo qoray adreeskooda iyo telefoonkooda.
Waxaa la soo ogaaday in uu boggaan ka dambeeyo nin ka tirsan xisbiga cunsuriga ah ee Sverige Demokraterna (SD) oo ku nool magaalada Umeå ee waqooyiga Sweden. Ninkaan ayaa ku adkeystay in websitekiisa uusan wax sharci ah jabin balse Waaxda Baaritaanka macluumaadka (Datainspektionen) ayaa waxay ku wadaan dib u eegid ku saabsan boggaan iyaga oo booliska u gudbiyay arintiisa.
Hadaba ninka abuuray bogga ayaa go’aansaday in uu xiro boggiisa balse waxaa la wareegay koox kale oo cunsuriyiin ah oo balan qaaday in ay sii wadayaan daabacaada macluumaadka xasaasiga ah ee dadka sharciga la siiyay. Kooxdaan la wareegtay ayaa iyaga laftooda ka tirsan xisbiga SD iyagoo horay ula wareegay hawlihii uu qaban jiray boggii caanka ahaa ee isagana la xiray ee loo yaqaanay Politisk Inkorrekt.
Cunsuriyiinta ayaa waxay yihiin kuwo aad ugu firfircoon internetka iyaga oo fikradahooda ku dhisan naceybka ku faafiya internetka. Waxay abuureen kumanaan websiteyo kala duwan oo shabakad ah kana dhisan wadamo badan oo cunsuriyiinta ku quudiya hadalada qiyaaliga ah ee dhisan naceybka Islaamka iyo wixii u dhow.
Aqwaanyaaloow anni waa yaabaye meyla yaabteen waxa leen maqloowhaa website aan la jabsaday, webside us Guri oo cariish eh mii kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
WAA AAD LOOGU FARXO IN CUNSURIYIINTA DHAQAAQA AAY SAMEEYAANBA FASHIL KU DHAMAADO.